1WorldSync: Yakavimbika Chigadzirwa Ruzivo uye Dhata Management | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 11, 2016 Muvhuro, Kukadzi 13, 2017 Douglas Karr
Sezvo ecommerce yekutengesa ichiramba ichikura pamwero unotyisa, huwandu hwenzira dzechiratidzo dzinogona kutengesa pane dzawedzerawo. Vatengesi varipo pane nharembozha, mapuratifomu enhau, e-commerce mawebhusaiti uye muzvitoro zvepanyama zvinopa nzira dzinoverengeka dzekuwedzera mari dzekuitira vatengi.
Kunyangwe izvi zvichipa mukana wakakura, kupa simba kuvatengi kuti vatenge zvigadzirwa chero nguva uye chero kupi, zvinogadzirawo zvinetswa zvakati wandei kune vatengesi mukuona kuti ruzivo rwechigadzirwa rwakarurama, rwemhando yepamusoro, uye rwunowirirana munzira dzese idzi. Zvemukati-zvemukati zvemukati zvinoderedza kuona kwechiratidzo, zvinokanganisa nzira yekutenga, uye zvinogona kudzosera vatengi kure kweupenyu hwese.
Izvi zvinounza dambudziko rakasarudzika kune vatengesi zvakare. Kana zvigadzirwa zvavanonongedzera vanhu kuti varege kumiririrwa zvakanaka pamatanho, iko kuedza kuri kutambiswa. Chero zvigadzirwa zvekushambadzira zvinoda kuisa iwo iwo chaiwo emhando yepamusoro, zvirimo zviripo kuti uchengetedze huvepo hwakaenzana mune yega nzira yedhijitari.
Saka, vatengesi nevashambadzi vangaitei?
Pinza tarisiro yekugadzira yemhando yepamusoro yezvigadzirwa muchirongwa chebhizinesi chakazara
Chengetedza mari yepamusoro-soro uye zvigadzirwa zvemashoko ekugadzirisa maitiro
Tarisa mhinduro dzedhata dzinoreruka zviri nyore sezvo matekinoroji matsva nematanho achigadzirwa
Shanda nevanopa dhata vanogonesa yakasimba chigadzirwa kuwanikwa kugona kwekuwedzera kwechigadzirwa kuzadza
1WorldSync Solution Kuongorora
1WorldSync ndiyo yakawanda-inotungamira chigadzirwa ruzivo network, kubatsira, anopfuura 23,000 epasirese mabrands uye avo vekutengesa vadyidzani munyika makumi matanhatu - vanogovana zvechokwadi, kuvimba zvemukati nevatengi nevatengi - kuvapa simba rekuita sarudzo dzakanaka, kutenga, hutano uye mararamiro sarudzo. Iine vatengi mukati meFortune 60, 500WorldSync inopa mhinduro dzekuwedzera huwandu hwemisika, kubva kumakambani eFortune 1 kuenda kumabhizimusi madiki nepakati (maSMB).
Iyo kambani ine mahofisi muAmerica, Asia Pacific, uye Europe, uye inogona kusangana neruzivo rwechigadzirwa chero cheanotengesa waunofambidzana naye mune chero indasitiri, kusanganisa kusvika kwepasirese neruzivo rwemuno nerutsigiro. Iyo kambani ine mhinduro dzinowanikwa kumakambani pane ese nhanho yezvigadzirwa ruzivo uye dhatabhesi manejimendi.
Sezvo vatengi vachiita makambani zvakanyanya online, ivo vanoda yakakwira mhando mifananidzo, zvemukati, uye zvimwe kubva kumakambani. Yedu misika-inotungamira mhinduro inobvumidza makambani padanho rega rekutenga zvirinani kudzora kwavo ruzivo rwechigadzirwa, pakupedzisira zvichitungamira kune zvinoenderana zvinoenderana nevatengi zviitiko nekutengesa kwepamusoro. Dan Wilkinson, Chief Commercial Officer we1WorldSync
1WorldSync Zvimiro zveVagashiri:
Item setup uye kugadzirisa
Chigadzirwa zvemukati kuwanikwa
Kubatanidzwa kwenharaunda uye kugoneswa
Global zvemukati kuwanda
1WorldSync Zvimiro zveZvinyorwa:
Kugovaniswa kwepasi rose zvemukati
Zvemukati kutora uye kufumiswa
Tags: 1worldworldtenga mapurogiramu epadivizvemukati kutorakugovana zvemukatikugutsikana kwemukatiecommerce zvemukatizvepasi rose zvemukati kuwandaomnichannel kataroguchigadzirwa zvemukatichigadzirwa zvemukati kuwanikwachigadzirwa infochigadzirwa ruzivo hutongichigadzirwa kugadzirachigadzirwa setuptengesa padivi maapplication
Nei infographics Iri Yechinhu Chero Chero SEO Reji